Archives mahafinaritra ny fianakaviana - IntoKildare
Betsaka ny zavatra ho hitan'ny fianakaviana sy ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra any Kildare, na inona na inona toetrandro na toerana misy azy. Manomboka amin'ny tots kely ka hatramin'ny tanora dia misy hetsika atao mifanaraka amin'ny rehetra!
Ny tanora sy ny teboka madinidinika dia samy manana ny hankafizany ao amin'ny Co. Kildare. Ny distrika dia feno safidy feno ho an'ny andro fianankaviana, manomboka amin'ny fihaonana amin'ny biby hafakely sy ny go-kart any Clonfert Pet Farm ka hatrany amin'ny golf sy zining zip ao Kildare Maze. Mbola tsara kokoa aza, misy ny fahafinaretana ho an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviana ao amin'ny National National Stud malaza any Ireland, izay manambatra ny hatsarana sy ny fiadanan'ny zaridaina manaitra miaraka amin'ny kianja filalaovana mahafinaritra, ny dian'ny ala mahafinaritra ary ny lalan'ny angano mahafinaritra.